Michael Bird – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Incredibles2(2018) Unicode Incredible 1 ကြည့်ဖူးတဲ့သူဆိုရင်တော့ Incredible 2ကိုကြိုက်မယ်ဆိုတာအသေအချာပါ ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ Mr Incredibleတို့လို စူပါဟီးရိုးတွေဟာ တရားဝင်တဲ့စူပါဟီးရိုးတွေဖြစ်မလာသေးပါဘူး ဒီဇာတ်လမ်းအစမှာ တော့Mr Incredible တို့မိသားစုဟာ Underminer ဆိုတဲလူဆိုးကို လိုက်ဖမ်းစီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လဲ မဖမ်းမိဘဲ မြိုထဲကို အထိအခိုက်အဆုံးအရှုံးတွေတာဖြစ်လာစေပါတယ် ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးတွေကိုဘဲမြင်တဲ့ ပြည်သူနဲ့ရဲတွေရဲ့ တွန်းအားပေးမှုတွေကြောင့် Mr Rick Dicker က Mr Incredible တို့ကို့တာဝန်မှရပ်စဲလိုက်ပါတယ် အဲ့နောက်မှာတော့Mr Incredible တို့မိသားစုဟာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန် မမျှော်လင့်ဘဲ သူဌေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလုပ်ကမ်းလှမ်းခြင်းကိုခံခဲ့ရဲပြီး Mrs Elastigirl ဟာထိုသူဌေးရဲ့ နည်းပညာအကူအညီတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး စူပါဟီးရိုးတွေကို တရားဝင်နာမည်ပြန်ရလာဖို့ ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတော့ ဟာသလေးတွေပါနှောပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ ကြည့်ရှုမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Reviewed Credit Zawgyi Incredible 1 ၾကည့္ဖူးတဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ Incredible 2ကိုႀကိဳက္မယ္ဆိုတာအေသအခ်ာပါ ဒီဇာတ္လမ္းမွာေတာ့ Mr Incredibleတို႔လို စူပါဟီး႐ိုးေတြဟာ တရားဝင္တဲ့စူပါဟီး႐ိုးေတြျဖစ္မလာေသးပါဘူး ဒီဇာတ္လမ္းအစမွာ ေတာ့Mr Incredible တို႔မိသားစုဟာ ...
The Incredibles (2004) Unicode Animation ချစ်သူများအတွက် အရမ်းကြိုက်လွန်းလို့ တင်လိုက်တာပါ…The Incredibles (2004) သည် IMDb 8/10 Rotten Tomatoes 97% Metacritic 90% Google users 94% ဒါရိုက်တာ Brad Bird ကိုယ်တိုင်ရေးသားရိုက်ကူးထား၍ သရုပ်ဆောင် Craig T. Nelson, Samuel L. Jackson, Holly Hunter တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Animation, Action, Adventure ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးမိသားစုတစ်စုဟာ သာမန်လူနေမှုဘဝမှာ တိတ်ဆိတ်စွာနေဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ ကမ္ဘာကို ကယ်တင်ဖို့ အတင်းပြန်လည်သွတ်သွင်းခံရတဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲ ဇာတ်ကားမှာ ကြည့်ရှုကြည့်ကြပါခင်ဗျာ…. Credit - Review Zawgyi Animation ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ အရမ္းႀကိဳက္လြန္းလို႔ တင္လိုက္တာပါ…The Incredibles (2004) သည္ IMDb 8/10 Rotten ...
IMDB: 8.0/10 586,139 votes